သြဂုတ်လ 2021 – Android Cheats သိကောင်းစရာများ
Monthly Archives: သြဂုတ်လ 2021
မြို့တော်ကို အနိုင်ယူပါ။: War Strategy Game Cheats&Hack
ကျွန်ုပ်တို့၏ရဲတိုက်အား သိမ်းပိုက်မှုစစ်ပွဲဗျူဟာဂိမ်းကိုကစားပြီး မြို့ကိုအနိုင်ယူပါ။! သင်၏ဗျူဟာများကို ပုံဖော်ပါ။, မင်းရဲ့တပ်တွေကို အမိန့်ပေးတယ်။, အကောင်းဆုံးချီတက်လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ပြီး ပြိုင်ဘက်တိုင်းကို အနိုင်ယူပါ။! အမြင့်ဆုံးဘုန်းတော်အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ပါ။!💪💪💪 မြို့ကိုအနိုင်ယူနည်း:🏰ပစ်မှတ်အဆောက်အဦနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး စစ်သားအရေအတွက်တိုးရန် မျဉ်းဆွဲရန် သင့်လက်ချောင်းကို ပွတ်ဆွဲပါ။🏰 မြှင့်တင်ပါ... ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, မြို, Conquer, ဂိမ်း, နည်းဗျူဟာ, စစ်
CARS DRIVER PRO – လှိုင်သာယာ&Hack
Incredible, exciting racing, engine roar, speed – that’s what awaits you in CARS DRIVER PRO. Drivearacing car at maximum speed alongacity street. Try your endurance! Crazy game! You can customize your car as you like – put on the coolest wheels, the most powerful engine, စသည်တို့. Different tracks, different brands of… ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): ကားများ, မင်္ဂလာပါ, DRIVER, လိုလားသူ
Zoo – Happy Animals – လှိုင်သာယာ&Hack
🙈 We’re going to the zoo, zoo, zoo… 🙉 Ever wanted to shave an alpaca, shower an adorable but filthy 🐘 elephant calf, leadacolumn of acrobatic 🦧 chimpanzees all the way to the 🍌 banana pile, or throw watermelons toaravening hippo? These are justafew of the crazy, cute and… ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): တိရစ္ဆာန်များ, မင်္ဂလာပါ, Happy, Zoo
Enemies are attacking your kingdom! Can you build and lead your troops to fight and defend your castle in time? Merge towers to defend your kingdom! Combining the usual merge gameplay with the exciting defense feature, Save The Kingdom will give youafun experience! Use resources to buildacastle, then the stronger the… ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, နိုင်ငံတော်, ပေါင်းစည်းပါ, သိမ်းဆည်းပါ။, Towers
Super Tony 3D – Adventure World gives you the chance to step back in time to your childhood.Tony’s World has been nothing but emptiness since the Princess got kidnapped into the jungle. သို့ဆိုလျှင်, စွန့်စားမှုစတင်သည်။!Your task is to help Tony run through the mysterious jungle, jump over the obstacles and super evil monsters… ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): စွန့်စားခန်း, မင်္ဂလာပါ, Super, Tony, ကမ္ဘာကြီး
BEAUTIFULLY SYMMETRICAL WARFARE! 🪖 Turn the tide and win the war in this elegantly simple casual tactics game that’s guaranteed to appeal to all armchair commanders and pocket Napoleons. Head into battle withasingle 👉 swipe and watch your little warriors eliminate the enemy, allocating your cute little forces with skill and precision to… ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, အောင်ပွဲ, နည်းဗျူဟာ, တာဝါ, စစ်
“Call superhero. This is emergency, we need their help” 📢 No worry! Heroes are on their way to rescue The villains are destroying the planet, to protect peaceful live of residents, they must be beaten. Are you ready to take on the role ofahero to rescue the world? Come and join with us… ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, မော်ကွန်း, တွေ့ပါတယ်။, ပြေး, SuperHero, Transform
Wonderland : Peter Pan Adventure ဇာတ်လမ်း Cheats&Hack
Wonderland သည် သင့်ကိုယ်ပိုင် ဒဏ္ဍာရီပုံပြင် စွန့်စားခန်းကို ဖန်တီးပြီး သင်ဖန်တီးသည့် ဇာတ်လမ်းများကို ကစားသည့် မှော်ဆန်သောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။. ပီတာပန်, Wendy, ကပ္ပတိန်ချိတ်နဲ့ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ကလေးတွေဟာ စွန့်စားမှုအသစ်အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။. ပျောက်ဆုံးသွားသော ကလေး၏သစ်ပင်အိမ်ကို စူးစမ်းပါ။, ပင်လယ်ဓားပြ၏ သင်္ဘောကို သွားရောက်ပြီး ဝှက်ထားသော ရတနာများကို ရှာဖွေပါ။. ဇာတ်ကောင်အသစ်များနှင့် နေရာများစွာဖြင့် ပြည့်နေသည်... ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): စွန့်စားခန်း, မင်္ဂလာပါ, Pan, Peter, ပုံပြင်, Wonderland
နံပါတ်တူ – ယုတ္တိဗေဒ ပဟေဋ္ဌိဂိမ်း လှည့်ကွက်များ&Hack
Number Match သည် ရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းများဖြင့် စွဲလမ်းစေသော ပဟေဋ္ဌိဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။: အတွဲများကို ယှဉ်ပြိုင်ပြီး အောင်မြင်ရန် ဘုတ်အဖွဲ့ကို ရှင်းလင်းပါ။. Number Match ကစားခြင်းသည် သင့်ဦးနှောက်အတွက် အသုံးဝင်သော ကစားချိန်တစ်ခုဖြစ်သည်။. သင်၏ယုတ္တိဗေဒနှင့် အာရုံစူးစိုက်မှုစွမ်းရည်များကို လေ့ကျင့်ပါ။, သင်၏မြင့်မားသောရမှတ်ကိုအနိုင်ယူရန်ကြိုးစားပါ။! သင့်ကလေးဘဝကတည်းက ဘောပင်နှင့် စက္ကူဂိမ်း၏ မိုဘိုင်းဗားရှင်းကို စမ်းကြည့်ပါ။. အခု… ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, ဂိမ်း, Logic, မီးခြစ်, Number, ပဟေ.ိ
ခန္ဓာကိုယ်လက်ဝှေ့ပြိုင်ပွဲ 3D – လှိုင်သာယာ&Hack
သက်သာရာရရန်အတွက် ရယ်စရာ 3D ဂိမ်းအချို့ကို သင်ရှာနေသလား သို့မဟုတ် အတွေ့အကြုံသစ်တစ်ခုရရန်လား။? အဆီနှင့် ပိန်ပိန်ပါးပါး ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်း 3D မိန်းကလေးဂိမ်းများ သို့မဟုတ် ပြေးခြင်းနှင့် တိုက်ခိုက်ခြင်းကို သင်နှစ်သက်ပါသလား။? အရင်တုန်းက မင်းကိုအရှက်ရစေခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးတွေကို အနိုင်ယူဖို့ Body Boxing ပြိုင်ပွဲမှာ ပိန်လှီတဲ့ အလှမယ်မိန်းကလေးကို အတုယူလိုက်ကြရအောင်။. ဒီဂိမ်းက သေချာပါတယ်… ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): Body, Boxing, မင်္ဂလာပါ, တွေ့ပါတယ်။